Inowanikwa iyo nyowani vhezheni yeParrot Security OS 4.2.2 | Linux Vakapindwa muropa
Inowanikwa iyo nyowani vhezheni yeParrot Security OS 4.2.2
Mazuva mashoma apfuura iyo nyowani yakagadzikana vhezheni yeParrot Security OS yekuchengetedzwa kwemakomputa yakaburitswa ichisvika mushanduro yayo 4.2.2 iyo yakaziviswa kuruzhinji kubudikidza nesitatimendi pane iyo blog yekuparadzira.
Iyi itsva vhezheni yeParrot Security OS 4.2.2 inouya nekuvandudzwa kutsva, kugadzirisa bug uye kuchengetedzeka uye pamusoro pezvose zvakawanda zvekuvandudzwa nyowani kubva pasi pegadziriro.
Kune avo vaverengi vasati vaziva kugoverwa ndinogona kukuudza izvozvo Parrot Security ndeye Debian-yakavakirwa Linux kugovera yakagadzirirwa neFrozenbox Team uye iyi distro inotarisa kuchengetedzwa kwemakomputa.
Iyo yakagadzirirwa kuyedzwa kwekupinda, kushupika kuongororwa uye kuongorora, komputa forensics, isingazivikanwe kubhurawuza webhu, uye kudzidzira cryptography.
Parrot OS inoitirwa kupa maturusi ekuyedza ekupinda mukati yakagadzirirwa nemhando dzakasiyana dzezvishandiso zvemushandisi kuyedza murabhoritari yavo.
Parrot yakavakirwa pabazi raDebian rinotambanudza, iine tsika yeLinux kernel. Tevera nhare yekuburitsa nhare.
Iyo desktop desktop inoshandiswa neParrot OS Linux kugovera iri MATE, uye default kuratidza maneja ndeye LightDM.
1 Nyowani vhezheni yeParrot Security OS
1.1 Nyowani zvinyorwa portal
2 Dhawunirodha uye gadziridza Parrot OS
Nyowani vhezheni yeParrot Security OS
Mazuva mashoma apfuura Lorenzo Faletra akazivisa kuvhurwa kweParrot 4.2.2 kuburikidza nesitatimendi pane iyo blog wekugovera.
Iyi vhezheni nyowani yeParrot Security OS 4.2.2 inouya neakateedzana ezvishandiso, akagadziridzwa mapakeji uye mabug fixes aburitswa kubvira yazvino Parrot Security OS 4.0.
Kuburitswa uku kune dzinoverengeka zvinowedzera kune kernel uye yepakati mapakeji, uye akawedzera maturusi matsva ekuchengetedza uye akavandudza vhezheni itsva yezvishandiso zvine simba zviripo.
Uyewo, Parrot Security OS 4.2.2 yakatumira yazvino vhezheni yeMetasploit 4.17.11. Wireshark 2.6, hashcat 4.2, edb-debugger 1.0 uye zvimwe zvakawanda zvakagadziridzwa maturusi.
Parror mainjiniya anonzwa kuti iyi gadziriso yanga iri kunetsa nekuda kweakawanda makuru magadziriso pasi pehood yesystem inotaridzika kunge yakafanana kana ichienzaniswa neshanduro yapfuura.
Uyewo, Armitage Turu yakazogadziridzwa uye iyo "inoshaya RHOSTS kukanganisa" yakagadziriswa.
Iyo nyowani vhezheni yeDebian inosimudzira ikozvino inopa yedu yemagetsi kuisa mifananidzo uye yakajairwa Parrot mifananidzo.
Firmware mapakeji akagadziridzwa kuita aWedzera yakafara rutsigiro rwehardware, kusanganisira AMD vega mifananidzo uye zvishandiso zvisina waya.
Iwo maAppArmor neFirejail profiles akagadzirirwa kupa mukana wakanaka wekuchengetedza pamwe nekushandisirwa kweakawanda CLI uye desktop kunyorera uye masevhisi.
Uye zvakare, zvakakosha kusimbisa kuti kuburitswa kutsva kwekugovera kwaive kunetsa kune vanogadzira nekuti zvaive zvakati omei.
Isu tinodada kuzivisa kusunungurwa kweParrot 4.2.
Kwaive kuburitsa kunonetsa kwazvo kuchikwata chedu nekuda kweakawanda makuru ekugadzirisa pasi pehodhi yesisitimu inotaridzika kunge yakafanana neshanduro yayo yapfuura, kunze kwenzvimbo nyowani yakagadzirirwa naFederica Marasà uye new graphic theme (ARK-Rima). .
Pamusoro pezvo, izvi zvinogadziridza zvinopa Firefox 62 uye zvimwe zvakawanda zvinogadziridzwa pamwe neyazvino vhezheni yeLibreOffice 6.1.
Nyowani zvinyorwa portal
Basa ririkuenderera mberi kubvisa yapfuura DokuWiki zvinyorwa zvinyorwa uye nekuitsiva iine yakazara static zvinyorwa zvinyorwa zvakanyorwa zviri kutengeswa, izvo zvingave nyore kuchengetedza kuburikidza neyedu GIT server.
Iyo nyowani zvinyorwa portal inogona kushanyirwa pano.
Dhawunirodha uye gadziridza Parrot OS
Si iwe unoda kuwana iyi nyowani vhezheni yekugovera iyi Linux chete Iwe unofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chekutora unogona tora chinongedzo kurodha pasi iyi vhezheni itsva.
Zvakare, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uende Parrot OS, iwe unogona kuwana iyo nyowani vhezheni pasina kuisa zvekare
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuvhura terminal uye kumhanya inotevera mirairo yekuvandudza:
Pakupedzisira iwe uchafanirwa kungotangazve komputa yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Inowanikwa iyo nyowani vhezheni yeParrot Security OS 4.2.2
Carlos Mantilla akadaro
Basa rakanakisa, kuzvipira uye kuzvipira mukuenderera mberi nekuvandudzwa kweakasiyana maturusi emakomputa atinoshandisa anoyemurika, kuita kuti zvive nyore kupindirana, zvine hungwaru uye nehunyanzvi, zvichipa mashandiro, kugona uye kuita kune kwedu kwezuva nezuva basa, ndatenda iwe, ini ndiri mudzidzi weKuongorora uye Kuvandudza Ruzivo Systems (ADSI) kuAutonomous University yeCaribbean (Barranquilla - Colombia) uye ndinozviona ndiri muridzi weGNU / Linux Project, kusanganisira kugoverwa kweLinux.
Pindura Carlos Mantilla